Profile | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Find the Dr Chit Nge’s Profile in this category.
Posted on December 16, 2012 by chitnge
သူရဲကောင်းလား ပညာရှိလား တင်စားသုံးရမယ်ဆိုရင် – မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူရဲကောင်း မရှိတော့ဘူး၊ ပညာရှိတွေပဲ ရှိတော့တယ် လို့ ပြောရမလို အခြေအနေက ဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူးတွေ မရှိတော့ဘဲနဲ့ နောက်ဆုတ်ကြတယ်၊ ဘေးကနေတယ် ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ တစ်ချို့ကလည်း ဗြောင်ပြောတယ် – “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်နေတာပဲ ကျွန်တော်တို့ နောက်ကနေမယ်၊ ဘေးကနေပမ်းမယ်” ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ နောက်ဆုတ်ကုန်ကြတဲ့ သဘောပါပဲ .. .. ဒီတော့ ပညာရှိတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ၊ သူရဲကောင်းတွေ မဖြစ်တော့ဘူး No tags for … Continue reading →
A Brief Biography of Dr Chit Nge (English)
Posted on December 13, 2009 by chitnge
Dr. Chit Nge was born in Lake-San-Khon village, Amarapura Township, Mandalay Division. His parents were U Chit and Daw Kyawt. His real name is Aye Ko. He had his Master’s degree in philosophy from Mandalay Arts and … Continue reading →
Posted in Profile	| Tagged Buddhism, Nibbana, Science, Vipassana	| Leaveacomment